Minisitry ny fizahantany Maorisy momba ny fanambin'ny Sina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Minisitry ny fizahantany Maorisy momba ny fanambin'ny Sina
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Maorisy • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Anil Gayan, minisitry ny fizahan-tany tamin'ny Alarobia, dia nanao ity kabary momba ilay antsoiny hoe "fanamby an'i Shina" ity. Nandritra ny fotoam-pivoriana atidoha natao tamin'ny volana lasa teo tao amin'ny Hennessy Park Hotel, Ebene:
Ireo mpiasa ambony rehetra ao amin'ny Air Mauritius,
Ny solontenan'ny Hotely rehetra,
Ireo mpandray anjara amin'ny varotra fizahan-tany any Sina,
Andro tolakandro tena tsara ho anareo rehetra!
Avelao aho aloha hiteny, Tompokolahy sy Tompokovavy, fa manenina aho fa tsy afaka niaraka taminareo nandritra ity fotoan-dehibe niasana ity antsoiko hoe "China Challenge."
Azoko antoka ihany koa fa efa niresaka ny olana rehetra nisy fiatraikany ratsy tamin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany avy any Shina ianao.
Mampalahelo fa nandiso fanantenana ny tantaran'ny zavatra niainantsika tamin'ny fizahan-tany any Sina. Tsy te-hanao fanatanjahantena manome tsiny sy mahamenatra aho satria tsy hisy dikany izany. Fa ny fanatrehako eto anio tolakandro dia ny hijery ireto olana manaraka ireto:
Ny maodely efa misy amin'ny fampiroboroboantsika an'i Shina ve no mety? Raha tsy izany, nahoana isika no nanomboka tamin'ny maodely diso? Inona no tsy maintsy ataontsika ankehitriny mba hamongorana ireo fahavoazana efa naterak'izany?
Nilaza aho tamin'ny fiandohan'ny fanambarana nataoko fa diso fanantenana aho tamin'ny zava-bitan'i Sina satria fantatrareo fa tsy ela akory izay dia efa ho 100 000 ny mpizahatany sinoa tonga tany Maurice. Androany latsaky ny 50 000 isika. Ka inona no nitranga?
Mivarotra ny vokatra fizahantany eto amintsika ve izany? Mbola mahazo aina ve isika amin'ny famarotana an'i Maorisy any Shina ho tanjona maintso? Sa zavatra hafa no tadiavin'ireo mpizahatany sinoa?
Azo atao ve ny mamaha ny toe-javatra? Faly ve isika Air Mauritius mahita ny tifitra lehibe nataon'ny Air Mauritius androany tolakandro? Moa ve ny Air Mauritius izay mpitatitra tokana mankany Sina manolo-tena amin'ny fampandrosoana ity tsena ity?
Naheno foana aho fa lafo be ny vidin'ny Air Mauritius hisidina mankany Sina. Ary mila miresaka an'io olana io izy ireo. Zava-misy ve ny vidin'ny sidina mankany Sina? Azontsika atao ve ny manombatombana amin'ny marina sy manaparitaka ny vidiny hamaritana raha toa ny zavatra lazain'ny Air Mauritius amintsika raha ampitahaina amin'ny vidin'ny zotram-piaramanidina hafa manidina mankany Shina.
Mampiakatra an'ireto olana ireto aho satria azoko antoka fa tsy maintsy niresaka azy ireo ianao nandritra ny andro. Tsy mitsahatra ny milaza amin'ny mpandray anjara amin'ny fizahantany fa ny fahatsapana ny vidim-piainana dia ahiahy ho an'ny rehetra ary tsy tokony hohadinointsika mihitsy fa manana safidy ny mpandeha. Tokony hanetry tena amin'ny zavatra atolotray isika ary izay atolotsika dia tokony ho mahay mandanjalanja sy mora vidy.
Fa voalohany indrindra avelao aho hanome anao ny fomba fijeriko manokana momba an'io. Naman'i Sina aho, efa tany China matetika aho ary mino aho fa namana akaiky an'i Maurice i China. Ary eo amin'ireo namana dia tsy maintsy afaka miara-miasa isika mahita ny fomba hanatsarana ny finamanana sy hahita ny fomba ahatongavan'ireo namanay bebe kokoa hitsidika anay ary maro ny Maorisianina handeha ho any Shina ihany koa. Ka io no fototra iasako anio.
Ka voalohany indrindra, Tompokolahy sy Tompokolahy, mino aho fa mpiara-miombon'antoka amin'ny indostrian'ny fizahantany i Sina. Saingy ny fanontaniana tokony horesahintsika dia vonona ho an'ny Sinoa ve isika?
Moa ve isika mametraka ny Sinoa tsy tapaka an-trano amin'ny sidina, amin'ny sidina Air Mauritius ary koa amin'ny hotely? Araka ny fantatrao dia i Shina no manana mpizahatany betsaka indrindra ary hiakatra hatrany ity isa ity. Azontsika atao ve ny tsy miraharaha an'i Shina ary, raha tsy miraharaha an'i Shina isika, ho tombontsoam-pirenena ve ny hanaovana izany?
Ampahafantarina ahy fa ny 10% amin'ireo Sinoa ihany no manana pasipaoro ary efa 130 tapitrisa ny sinoa. Raha avo roa heny izany isa izany ao anatin'ny taona vitsivitsy, dia azonao atao ny maka sary an-tsaina ny mety hitranga.
Efa an-taonany maro no nisy ny fisian'ny Sinoa tao Maorisy ary, noho io tantara io ary koa tamin'ny fanapahan-kevitry ny governemanta Maorisiana hitahiry ny kolontsaina, ny soatoavina, ny fomban-drazana ary ny fiteny Sinoa, dia tsy tokony ho sahirana i Maurice tamin'ny hitaona ireo mpizahatany sinoa. Manana Chinatown izay tsy ananan'i Seychelles isika, tsy ananan'i Maldives. Ka manana olana isika raha tsy mahasarika ireo mpizahatany sinoa.
Tena toerana azo antoka sy tsy misy aretina ary tsy misy valan'aretina izahay. Tsy olana ny filaminana. Manana serivisy serasera sy serivisy IT izahay. Mankalaza ny Taom-baovao sinoa ho fialantsasatra ampahibemaso i Maorisy. Nanana pagoda izahay hatramin'ny nahatongavan'ilay sinoa mpifindra monina voalohany tany Maurice. Manana mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina sinoa mandray anjara amin'ny sehatry ny fiainam-bahoaka sy ny fiainana manokana any Maorisy izahay.
Manana ny rivotra madio, ny masoandro, ny tontolo mahafinaritra isika, manana ny dite izahay ary izany rehetra izany dia teboka fivarotana lehibe indrindra. Maorisy dia manana vola taratasy misy ny sarin'ny endrika sinoa-maorisiana ary hita hatraiza hatraiza ny nahandro sinoa. Nanana masoivoho sinoa nandritra ny am-polony taona maro izahay ary i Maurice kosa manana ny masoivohon'i Beijing.
Nandamina fampiroboroboana lalana tany amin'ny tanàn-dehibe maro any Shina tsy tapaka izahay. Nanao fampielezan-kevitra amin'ny media sosialy izahay, nisy olo-malaza tonga taorian'ny nanasana anay. Ka inona ny olana?
Olana fahitana / fanentanana ve izany? Moa tsy tsy mety ny ataontsika sa tsy mety ny ataontsika rehefa mampandroso an'i Maorisy any Shina isika? Tsy ampy amin'ny dokam-barotra ve isika?
Inona ny maodely ara-toekarena tokony hananantsika ny sinoa? Izany no antony mahafaly ahy fa eto ilay namako masoivohon'i Sina satria mila miaraka amin'ny manampahefana sinoa izahay mba hiezaka hitady ny valin'ireo fanontaniana ireo. Ary azoko antoka fa raha manao izany tsara isika, dia ho eo anilanay ny manampahefana sinoa mba hamaly faty mba handehanan'ireo mpiasan'izy ireo mankany amin'ny firenena afrikanina hampiasa ireo mpitatitra Maurice. Afaka misambotra ny ampahany amin'ireo orinasa ireo isika fa mila miresaka amin'ny manampahefana. Tsy afaka miasa amin'ny silo intsony isika, tsy maintsy misokatra amin'ny fahafaha-manao vaovao, tsy maintsy misokatra amin'ny sosokevitra, tsy misy marina foana. Ary izany no hinoako fa mila manana topy maso feno momba ny fomba nanaovantsika zavatra isika.
Avelao aho hanohy hanasongadina ireo olana ireo.
Mila mijery ny politikan'ny fidirana an-habakabaka ve isika amin'izany?
Be loatra ve ny saran-dalan'ny Air? Satria henoko foana fa olana ny saran-dalan'ny rivotra.
Ahoana ny fifandraisana amin'ny rivotra? Manana sidina azo antoka sy azo antoka ve isika? Afa-po ve isika amin'ny tsy fivadihan'ny fandaharam-potoanan'ny mpitatitra anay?
Tanàn-dehibe inona no tokony hifantohantsika?
Karazan-trano inona no tadiavin'ireo mpizahatany sinoa? Manana trano fonenana mifanaraka amin'izay ilain'ny Shinoa mpizahatany ve izahay?
Moa ve zava-misy ny fitsangatsanganan'ny sinoa mandritra ny fotoana voafaritra manokana rehefa manao fety izy ireo? Mila mamantatra isika satria te-hamidy an'i Maorisy ho toeran-kaleha mandritra ny taona. Azontsika atao ve ny manintona azy ireo amin'ny vokatra iray mandavantaona?
Tokony hikendry vondrona mahaliana manokana any Shina ve isika? Efa nanao zavatra tsy mety ve isika sa nanao ratsy?
Afaka mikendry ny hisotro ronono ve isika? Miaramila? Ray aman-dreny manan-janaka? Honeymooners? Olona manao fanatanjahan-tena? Golf? Fihazana? Manjono? Trano filokana?
Mamelà ahy koa hiteny zavatra eo imason'ny kapitenin'ny indostrian'ny hotely. Mankany amin'ny foibe manerana an'izao tontolo izao aho ary maheno zavatra ary mihevitra aho fa adidiko amin'ny maha minisitry ny fizahantany ahy ny mizara izay henoko amin'ireo mpiara-miombon'antoka rehetra. Tian'ireo mpizahatany sinoa ny mandeha any amin'ny hotely misy marika. Moa ve isika manao zavatra mety amin'ny lafiny marika amin'ny trano fandraisam-bahiny? Manome ity olana ity ho an'ireo kapitenin'ny indostria aho. Raha matotra amin'ny fandehanana any Chine izy ireo dia tokony horesahina ity olana ity.
Tokony hanana toeram-pivarotana bebe kokoa ve isika ary miantsena ho an'ny vokatra marika?
Azontsika atao ve ny mandamina fetibe miantsena amin'ny Sinoa toa an'i Singapore?
Tsy milaza aho hoe efa eo isika fa afaka manana tondrozotra mandritra ny 5 taona ve isika? 10 taona? Afaka misarika karazana orinasa isan-karazany any Maorisy izahay.
Azontsika atao ve ny mandamina toby fialan-tsasatra mba hianaran'ny ankizy na hampiharihary amin'ny fiteny hafa? Ary azoko antoka fa ho faly ny ray aman-dreny raha mamela ny zanany ho mpampianatra ary mankafy ny fialantsasatra. Ireto anefa no zavatra mila ataontsika.
Moa ve isika Tompokolahy sy Tompokovavy tokony hihevitra ny kambana Maorisy sy La Réunion ho fonosana fialantsasatra? Azo atao ve izany ao anatin'ny fikambanana Nosy Vanilla eo ambanin'ny fiheverana fa mifameno?
Mila manintona mpitatitra hafa koa ve isika? Avy any Chine? Sa mety tsy avy any Shina irery?
Azontsika atao ve ny maka ny iray amin'ireo Carriers Cargo mba hitondrana ireo mpizahatany sinoa any Maurice?
Ny fahalianako dia tsy ny fahaverezan'ny fahalianako any Shina. Mety mbola hisy ny fahasarotana fa tsy azontsika atao ny manary na manadino ireo fampiasam-bola rehetra efa natao nandritra ny taona maro, amin'ny lafiny vola amin'ny olombelona sy ny loharanom-pahalalana hafa, ary tsy maintsy mamolavola paikady ho avy izahay ary hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miombon antoka rehetra mba hahazoana antoka fa tsy very ny anjaran'ny tsena intsony.
Noho izany antony izany dia tokony hifanerasera amin'ny rehetra ny Air Mauritius ary tsy afaka manohy manao zavatra samirery raha tsy misy ny fifampidinihana amin'ireo mpandray anjara rehetra mifandraika amin'izany, indrindra ny minisiteran'ny fizahantany sy ny MTPA.
Misaotra anao aho tamin'ny fiheveranao tsara.